Apple Kuona Kudonha Kuonekwa Kunogona Kutumira Zvekurapa Ruzivo Zvakare Ndinobva mac
Imwe yezvinhu zvitsva zvakaunzwa makore mashoma apfuura muApple Watch kwaive kugona kwayo tsvaga mushandisi madonhwe uye tanga protocol kuti ikubatsire. Izvo Apple zvinoda kuwedzera ndizvo rumwe ruzivo rwunogona kupihwa mukufona ikoko izvo zvinoitwa kune ve emergency emergency. Nenzira iyi, vashandi vehutano vanouya panzvimbo iyi vanozove neruzivo rwakakwana pamusoro pemurwere.
Chaizvoizvo izvo zvinoita wachi yacho kuvhura yambiro kana yaona kudonha. Kana mushandisi asingaimise, kuteedzana kwekufona kuenda kune ve emergency mabasa kunotangira kupi kupihwa ruzivo kwavari nezve zvakaitika uye nenzvimbo yemunhu. Shure kwaizvozvo, vanhu vakasarudzwa sevanosangana nechimbichimbi vanoshevedzwa kuti vavazivisewo.
Apple inodaidzira kuti vekutanga vanoshevedza vashandi vezvehutano kuti vave neruzivo rwakawanda kuti vakwanise kushongedzera zvimbuzi maonero akazara emurwere anovamirira. Nenzira iyoyo vanogona kugadzirira zvirinani kurapwa. Ruzivo urwu runogona kuve nenhamba yedata, nhoroondo yezvokurapa yemunhu, kurova kwemoyo, kukwirira, huremu ... nezvimwewo;
Meseji inotumirwa kuzvimbuzi inogona kudzokororwa kusvika panokwana katatu ine chiyero chemoyo. Rangarira kuti neIOS 13.6 nyowani nyowani inonzi "zviratidzo" yakawedzerwa kune iyo iPhone matinogona kunyora pasi kana kurodha nhevedzano yemamiriro ezvinhu anoitika mukati mehupenyu hwedu hwese. Iyi data inogona kutorwa mukucherechedzwa newachi mune yekuona kwekudonha kwatiri kutaura nezvako.
Tiri kutaura nezve zano chete, Izvo hazvisati zvaitika uye zvinoita sekunge zvikadaro, hazvizove chero nguva munguva pfupi. Icho hachisi chokwadi chekupenga. Chero chipi zvacho chinoita kuti zvive nyore kune vashandi vehutano kuti vaite basa ravo, gamuchirai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Kuonekwa kwekudonha kunogona kutumira ruzivo rwekurapa futi
Apple Arcade Debuts "Mutambo Wechigaro: Chirevo cheGunguo"
Lady Gaga achange aine yake redhiyo show paApple Music